क्षयरोगबारे जनचेतना अभाव – Karnali Pati
क्षयरोगबारे जनचेतना अभाव
काठमाडौं । उदयपुरकी राई थरकी ५८ वर्षीया एक महलालाई ६ वर्षअघि वर्षदिनसम्म सुख्खा, खोकी लाग्ने, छाती दुख्ने, साँझ–बिहान सामान्य ज्वरो आउने भइरहृयो । आफ्नो रोग निको पार्न उनले एक वर्षसम्म गाउँमा भएका सबै धामीझाक्रीलाई हेराइन् ।
उनको रोग निको हुनुको साटो झन् बढ्दै जान थाल्यो । विस्तारै उनको खकारमा रगत आउन थाल्यो । त्यसपछि आफन्तले अरू धामीझाँक्री बोलाएर देखाए । धेरैजसो धामीले घरकै कुलदेवता रिसाएर यस्तो भएको पनि बताए ।
‘एक दिन धामीले फुक्दाफुक्दै धामीकै अगाडि रगत उल्टी गरेँ । त्यसपछि सबै गाउँलेले यो बाँच्दिन भने । एकजना छिमेकीले अस्पताल लैजाने सल्लाह दिए । श्रीमान् र गाउँलेको सहयोगमा मलाई विराटनगर लैजानु भएछ । मलाई होसै भएन,’ उनले भनिन् ‘बाँचेर फर्किन्छु भन्ने आश थिएन तर अस्पतालबाट निको भएर फर्किएँ । बाँचेर फर्किंदा गाउँले सबै छक्क परे ।’
धेरै बिँडी र रक्सी पिउने बानीले गर्दा आफूलाई क्षयरोग लागेको उनले चिकित्सकबाट थाहा पाइन् । अहिले उनी सुर्तीजन्य पदार्थबाट टाढा छिन् तर बेलाबेलामा आफ्नो पुरानो रोग बल्झेको उनले बताइन् ।
सिन्धुलीका ५६ वर्षीय एक पुरुष पटकपटक मृत्युको मुखमा पुगे । विकट गाउँमा जन्मेका उनी पनि अस्पताल जानुको साटो धामीझाँक्रीकै भर परे । काठमाडौं बस्ने छोराले उनलाई तीन वर्षअघि अस्पताल लगेर उपचार गराए । उनलाई पनि लगातार खोकी लाग्ने, बेलाबेलामा खकारमा रगत देखा पर्ने र साँझबिहान ज्वरो आउने हुन्थ्यो । उपाचारपछि उनी पूरा ठीक भए । उनले आफूलाई क्षय रोग लागेको रहेछ भन्ने पनि थाहा पाए । चेतना अभावका कारण धेरैले क्षयरोगबाट ज्यान गुमाएको उनको भनाइ छ । अहिले पनि आफ्नो रोग पहिचान गर्न नसकेर धामीझाँक्रीकै भरमा बसेका गाउँले पनि प्रशस्तै रहेको उनले बताए ।
उनीहरू त एक उदाहरण पात्र मात्र हुन् । देउता लागेर बिरामी भएको र धामीले निको पार्ने विश्वास गर्ने व्यक्ति धेरै भेटिन्छन् । गरिबी र अशिक्षाका कारण अहिले पनि समाज परिवर्तन भइनसकेको जानकार बताउँछन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को तथ्यांकअनुसार विश्वमा एक करोड पचास लाखभन्दा बढी क्षयरोगी छन् । नेपालमा करिब ४४ हजारको हाराहारीमा क्षयरोगी रहेको अनुमान छ । तीमध्ये ३२ हजार रोगीमात्र स्वास्थ्य चौकी गएर परीक्षण गराएका छन् । परीक्षण गराइए पनि अधिकांश बिरामीले उपचारमा निरन्तरता नदिएको तथ्यांकले उल्लेख गरेको छ । सन् २०१६ मा संगठनले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा ४४ हजार बिरामी भए पनि १२ हजारभन्दा बढी बिरामी सम्पर्कविहीन छन् ।
सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनका अनुसार महिनामा ५ देखि ६ जनाको हाराहारीमा क्षयरोगका बिरामी अस्पतालमा भर्ना हुने गरेका छन् । तीमध्ये धेरैजसो वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका छन् । नेपालमा गहन अध्ययन अनुसन्धान नभएकाले अहिले नेपालमा क्षयरोग बिरामी कति छन् भन्ने सरकारी तथ्यांक एकिन गर्न नसकिएको डा. पुनले बताए । यस विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा उनको भनाइ छ । गाउँगाउँमा जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने डा. पुनले बताए ।
प्रकाशित मितिः आइतवार, मंसिर १७, २०७४ 3:14:11 AM